Madziva seals last over thriller for Zimbabwe
Neville Madziva sealed a last over thriller as Zimbabwe defeated Bangladesh by three wickets in the second Twenty20 International in Mirpur to level the two-match series 1-1.
Bangladesh scrape through to victory against Zimbabwe
Mahmudullah played a calm and composed innings along with Mashrafe Mortaza to steer Bangladesh past Zimbabwe's total of 131 with four wickets in hand in the first Twenty20 International in Mirpur.
Bangladesh seal series after Imrul Kayes fifty
An important fifty from Imrul Kayes and a commanding bowling performance saw Bangladesh beat Zimbabwe by 58 runs in the second One-Day International in Mirpur to go 2-0 up in the three-match series.
Rahim, Shakib lead Bangladesh to a massive win
Riding on a sublime hundred from Mushfiqur Rahim and a five-wicket haul from Shakib Al Hasan, Bangladesh defeated Zimbabwe by 145 runs in the first One-Day International in Mirpur.
The Bangladesh selectors have included uncapped fast bowler Kamrul Islam Rabbi in the 14-man squad for the first two One-Day Internationals of the series against Zimbabwe which begins on 7th November.
The Zimbabwe selectors have recalled Graeme Cremer and Regis Chakabva for the upcoming limited overs series against Bangladesh which will get underway from 7th November.
Former Zimbabwe captain Alistair Campbell has tendered his resignation from the post of director of international cricket and commercial affairs with Zimbabwe Cricket.
The Bangladesh Cricket Board has confirmed on Wednesday that Zimbabwe will visit to play three One-Day Internationals and two Twenty20 Internationals in the first two weeks of November.
The cricket storm after the calm
We had some unexpected calm as the end of the 2015 season merged into the start of the 2015/16 season with an unusually quiet time in the international game.